Amanqaku kaAndrey Koptelov malunga Martech Zone |
Amanqaku ngu Andrew Koptelov
UAndrey Koptelov ngumhlalutyi wezinto ezintsha e-Itransition, inkampani yenkcubeko yesoftware enenhloko eDenver. Ngamava anzulu kwi-IT, ubhala malunga neetekhnoloji ezintsha eziphazamisayo kunye nezinto ezintsha kwi-IoT, ubukrelekrele bokufakelwa, kunye nokufunda ngomatshini.
NgeCawa, uDisemba 20, 2020 NgeCawa, uDisemba 20, 2020 Andrew Koptelov
Ngabantu abaninzi ababandakanyekayo kunxibelelwano lwe-intanethi mihla le, amajelo eendaba ezentlalo abe yinxalenye ebalulekileyo yezicwangciso zentengiso zamashishini azo zonke iintlobo. Kwakukho i-4.388 yezigidigidi zabasebenzisi be-intanethi kwihlabathi liphela ngo-2019, kwaye iipesenti ezingama-79 kubo babengabasebenzisi bezentlalo. Ingxelo yeLizwe yeDijithali xa isetyenziswa ngobuchule, intengiso yemidiya yoluntu inokuba negalelo kwingeniso yenkampani, ukubandakanyeka kunye nokwazisa, kodwa ukubakho kumajelo asekuhlaleni akuthethi ukusebenzisa